Zidane Muxuu Ka Yiri Guushii Ay Ka Gaareen Eibar & Hadii Wali Ay Rajo Ka Leeyihiin La Liga %
Zidane Muxuu Ka Yiri Guushii Ay Ka Gaareen Eibar & Hadii Wali Ay Rajo Ka Leeyihiin La Liga
Tababaraha Real Madrid, ee Zinedine Zidane, ayaa wuxuu ka hadlay guushii ay ka gaareen dhigooda Eibar, taasoo ahayd 2-1, waxaana labadda gool uu ka helay ciyaaryahankooda lagu magacaabo Cristiano Ronaldo.
“Guushaani waxay igaaga dhigan tahay dhadhan aad u qoto dheer,” ayuu Zidane ciyaar kadib yiri, isagoona intaas ku daray: “[Eibar] waa ay naga fiicneed, waxay dheeleen kulan fiican, waxaan dheelnay kulana dag, si fiican ayay u ciyaaraan.
“Waan ogeyn inaan ku dhibtooneyno oo aan dhibtoonno, waxaan ku dhibtooday kubada, lakiin waxaan ku dagaalameynay dabeecadeena waana guuleystay.
“Ilaa dhamaadka, horyaalku waa suurtogal, mana ahan oo kaliya annaga.
“Waxaa inaad bixisaa foojignaan, waa inaan sii wadno, hadii aan dooneyno wax, waa inaan badino kulan kasta.
“Haatan waan nasan karnaa, inaan la joogno qoysaskeena oo aan isku diyaarino ciyaarta soo socota.
Sikastaba, isbuuc nasiino ah kadib, waxay kulanka soo socda ay la dheeli doonan ciyaartoyda Real Madrid, kooxda kuabda cagta Girona, wuxuuna kulankaan dhici doonaa maalinta Axadda ah ee Isbuuca soo aadan
Eibar vs Real MadridLa LigaZidane